Ogaden News Agency (ONA) – Kooxda TPLF oo Shir Bilaa Ujeedo Ah Maqale Kuqabatay.
Kooxda TPLF oo Shir Bilaa Ujeedo Ah Maqale Kuqabatay.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Maqale ee xarunta Gobolka Tigrey ayaa sheegaya in kooxda wakhtigeedii dhamaaday ee TPLF ay halkaas kuqabatay shir aan ujeedo lahyn oo ay isugu yeesheen qaar kamid ah dhalinta qoomiyadaha lagumaysto.
Sida xogta aan kuhelay kooxda TPLF ayaa magaalada Maqale isugu keentay 2000 oo kamid ah dhalinta taliska wayaanaha u adeega ee calooshood ushaqaysta yaasha looyaqaano, kuwaas oo shir ujeedo iyo kajeedo la’aan ah loogu yeedhay.
Taliska wayaanaha ayaa shirkan ku tilmaamay shir muhiim ah oo ay kasoo qayb galeen dhalin yaro aad ubadan oo Kaadir ah kuwaas oo sida uu talisku sheegay wax badan kabadali doona dadaalada loogu jiro amaanka iyo hormarka waa sida hadalka ay udhigeen e.
Hase yeeshee dadka siyaasada gumaysiga udhuun duleela ayaa sheegaya in ay kooxda TPLF tu dhalinta kucadaadin doonto sidii ay udamin lahaayeen colaada holcaysa iyagoo ku eed sheegtay in aysan waxba kala qabanin kacdoonada socda mudada labada sano ah, sidoo kale isku daygan ayay kutilmaameen neef gowracan geedo kama gudo, waxayna sheegayaan in aysan dhalintu damin karin mowjadahan dadka ah ee soo fatahay.
Kooxda TPLF ayaa isticmaalaysa kaararkii ugu dambaysay waxayna kooxdu horaan ugu fashilantay shirar isdaba joog ah oo ay uqabteen qoomiyada Tigreega iyo waliba qoomiyadaha kale ee lagumaysto, sidoo kale shirkan ayaan wax natiijo ah laga sugaynin wuxuuna umuuqdaa dameer ceel kudhacay kooy kooyna waa lagu dayaa.
Dhinaca kale waxaa talooyinkii kooxda TPLF siwayn uga caga jiidaya dhamaan dadkii ushaqayn jiray kooxda oo arkay gudcurka madow ee ay kusii socdaan.